गीत संगीत सुन्ने पुस्ताको लागि पूर्ण नेपालीको नाम नौलो होइन तर, पछिल्लो समय संगीतप्रेमीहरुको रोजाइमा सुन्ने संचारमाध्यामहरु प्राथमिकतामा नपरेकोले लोकभाकाका ‘लिजेन्ड’ पूर्ण नेपाली चर्चाबाट केही पछि परेको जस्तो देखिन्छन् । नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा बिगत ५ दशकदेखि योगदान पुर्याएका नेपालीका ‘आहा कलिलो तामालाई’, ‘सोह्र बर्से उमेरमा’, ‘कस्की छोरी हौं’ जस्ता गीतहरु प्रायः नेपालीहरुको मुखमा झुन्डिरहने गरेका छन् । संगीतकार, नृत्य प्रशिक्षक तथा गायक समेत रहेका उनी पछिल्लो समय के गर्दैछन् ? भन्ने उत्तर खोज्न नेपालीपत्रको टोली उनको निजी निवास पुगेर एक अन्तर्वाता गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सामग्रीः
वि.सं २०११ साल पुस १६ गते कास्की जिल्लाको बाटुलेचौरमा जन्मिएका उनी संगीत क्षेत्रसँग सानो उमेरदेखि नै नजिक भए । १५ वर्षकै कलिलो उमेरमा उनको आफ्नो कलाले कास्कीको स्थानीय बजार ओगट्न थालिसकेको थियो । त्यसपछि उनी २०२६ सालमा काठमाडौं प्रवेश गरे ।
पछि उनले भारतको मध्यप्रदेशस्थित संगित साधना विश्वविद्यालयबाट संगीतमा बीम्यूज गरे । त्यस्तै, मध्यप्रदेशबाट कत्थक नृत्यमा डिप्लोमा, पट्नाको कम्युनिकेशन इन्ष्टिच्यूटबाट नाटक निर्देशन तथा स्कृप्ट लेखन कोर्ष, मध्यप्रदेशको संगीत सारधना विश्वविद्यालयबाट तबलामा डिप्लोमा गर्नसम्म भ्याए । त्यस्तै, तत्कालिन नेपाल राजकीय प्रज्ञा– प्रतिष्ठानमा २०२७ सालदेखि २०२९ सालसम्म संगीत तालिम लिएका थिए ।
पूर्ण नेपाली स्थानीय तथा आधुनिक गरि २१ वटा बाजाहरु राम्ररी बजाउन सक्छन् । ललितपुर सानेपास्थित उनको घरमा रहेको निजी स्टुडियो तथा स्टोरमा जाँदा पनि प्रश्ट हुन्छ उनी वाध्यवादनसँग कति नजिक छन् भनेर । उनी सारङ्गी, अरवाजो, मादल, खैँचडी, डम्फु, बाँसुरी, धिमे, खि, ढोलक, ढोलकी, ट्याम्को, दमाह, मुजुरा, टिन्छु, मुर्चङ्गा, हारमोनियम, तबला, गीतार किबोर्ड, ड्रम तथा ढ्याङ्ग्रो राम्ररी बजाउन सक्छन् ।
एल्बम तथा चर्चित गीतहरुः
नेपाली पुराना पुस्ताका कलाकार हुन् । विशेष गरेर उनी रेडियो नेपाल सुन्नेहरुमाझ निकै चर्चित थिए । उनका ८ वटा गिती एल्बमहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । उनका प्रकाशित एल्बमहरुमा होसियार !, हितको दौतरी भाग १, हितको दौतरी भाग २, बालश्रम, हे भानुभक्त, भजन (अडियो क्यासेट), निशानी तथा गीत मञ्जरी रहेका छन् ।
उनका चर्चित गीतहरुमा आहा... कलिलो तामालाई सोधरामलाई, सोह्र वर्षे उमेरैमा, काली पनि देखें मैले, खुट्टामा नेल पर्ला लगायत रहेका छन् । यसका अलावा उनले संगीत भरेको तर रेकर्डिङ नभएका गीतहरु पनि रहेका छन् । उनका केही गीतहरु ‘गन्धर्व संगीत र संस्कृती’ नामक ग्रन्थमा पनि प्रकाशित भएको छ । यसको साथै नेपाली चलचित्रमा पनि उनले स्वा. गोपाल योञ्जनसँग सहायक निर्देशक भइ काम गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनका गिती नाटकहरुमा उडाउ पुत्र, वुद्ध वाणी अपेरा, बिरालो र मुसा, कमिला र हात्तीको संवाद, समारी आईमाई, प्रतिक्षाको अन्त लगायत रहेका छन् ।
राज परिवारका सदस्यको पहिलो संगीत गुरुः
पूर्ण नेपाली संगीत कर्ममा आफू मात्रै रमाएनन् । आफूले पाएको ज्ञान उनले अरुलाई पनि बाँडे । उनले सेन्ट जेभियर्स स्कूलमा ३३ वर्षसम्म संगीत शिक्षक भएर काम गरे भने, त्यस्तै, भानुभक्त माध्यामिक विद्यालय, कान्ति ईश्वरी शिशु विद्यालय, आनन्दकुटी कन्या विद्यापिठ, सेन्ट मेरिज, विरेन्द्र सैनिकका विद्यार्थीहरुलाई संगीत सिकाए ।
विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई संगीत सिकाउने क्रममा उनीमाथि तत्कालिन राजपरिवारको आँखा पर्यो । त्यसपछि उनी राजपरिवारका पहिलो संगीत गुरु बने । उनले तत्कालिन युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन तथा पारस, प्रेरणा र पुजा शाहलाई करिव ४ वर्षसम्म संगित तथा नृत्य सिकाए । कुराकानीको क्रममा उनी सम्झन्छन् दीपेन्द्र अत्यन्तै राम्रो गीत गाउँथे साथै मादल र गितार पनि राम्रोसँग बजाउँथे भने तत्कालिन अधिराजकुमारी श्रुति राज्यलक्ष्मीलाई १२ वर्षसम्म संगीत र नृत्य सिकाए । श्रुतिको कत्थक नृत्य निकै राम्रो थियो । साथै पारस शाह पनि संगीतमा निकै शौख राख्दथे ।
पूर्ण नेपाली नेपाल तथा विदेशमा गरि ५ सय वटा भन्दा बढी सांगितिक कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । उनले तत्कालिन राजपरिवारको उपस्थित हुने कार्यक्रम देखि पूर्व–पश्चिम तथा विदेशमा कार्यक्रम गरिसकेका छन् । तिमध्ये कतिपय सामाजिक कार्यको लागि आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरुमा निःशुल्क गीत पनि गाए । उनी सांगितिक कार्यक्रम शिलशिलामा पश्चिम जर्मनी, हल्याण्ड, बर्मा, सिंगापुर, जापान, इटाली, फ्रान्स, टर्की, बेल्जियम, लन्डन, हङकङ, भारत, बंगलादेश, क्यानडा, अमेरिका लगायतका देशमा पुगसिकेका छन् ।
पूर्ण नेपालीको अर्को परिचयः
पूर्ण नेपाली गीतसंगितको क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैनन् । नेपाली मौलिक संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि उनी पछिल्लो समयमा अनुसन्धान कार्यमा पनि सक्रिय रहेका छन् । उनले अनुसन्धानबाट २०६० सालमा ‘गन्धर्व संगीत र संस्कृति’ नामको ग्रन्थ प्रकाशित गरिसकेका छन् । लोप हुन लागिसकेको गन्धर्व संस्कृतिको पुस्तक प्रकाशनपछि हाल उक्त समुदायका मानिसहरुले आफ्ना रितिरिवाजलाई निरन्तरता दिने गरेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, धार्मिक भजन पुस्तक ‘वन्दना’ पनि प्रकाशित गरिसकेका छन् । भने पछिल्लो समय नेपाल बाजा विशेष गरेर मादलकोको बारेमा उनले तराई बेल्टबाट अनुसन्धान सकिसकेका छन् । अब उक्त अनुसन्धानको लेखन कार्यमा अगाडि बढ्ने सोचमा रहेका छन् ।
सामाजिक कार्यमा पनि पूर्ण नेपाली निकै अगाडि रहेका छन् । उनले २० जनाभन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरे । उनले सयौं संगितप्रेमीहरुलाई निःशुल्क संगीत तथा नृत्य सिकाए । उनले सामाजिक अभियान्ताको रुपमा समेत काम गरेका छन् । उनी क्यानडामा रहँदा नेपाली कला संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । क्यानडामा रहेका नेपालीभाषीलाई नेपाली लोकबाजा तथा नृत्य सिउन पनि उनी लागिपरेका छन् ।
‘कारासोगा फेस्टिभल’ नेपालको प्रतिनिधित्व:
सन् १९८२ देखि निरन्तर रुपमा क्यानडामा आयोजना हुँदै आएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो बहुसांस्कृतिक ‘कारासोगा फेस्टिबल’मा नेपालको सहभागीता हुने वातावरण मिलाउनको लागि पूर्ण नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपाली लोकभाकाका ‘लिजेन्ड’ तथा क्यानडा तथा अमेरिकाको लागि नेपाली सांस्कृतिक दूूत (गुडविल एम्बेस्डर) रहेका नेपाली तथा क्यानडाको लागि नेपाली पर्यटन दूत नरबहादुर (एनबी) टण्डनको समेत साथ रहेको छ । सन् २०१७ देखि नेपालले कारासोगा फेस्टिबलमा सहभागिता रहेको छ । यस वर्ष पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली उक्त फेस्टिबलमा जाँदैछन् ।